Agụmakwụkwọ - Educationlọ Akwụkwọ Nkụzi Asụsụ
Home Bekee maka ndị gbara ọsọ ndụ, Asylees, SIV, na ndị na-agba ọsọ ahiaỌmụmụ
Usoro nkuzi Asụsụ Bekee
Asụsụ Bekee dị ka Asụsụ nke Abụọ
Klaasị ESL lekwasịrị anya n'asụsụ usọ. Mmụta anyị na-akuzi isi asụsụ asịrị nke ikwu okwu, ige ntị, ịgụ na ide. Anyị nwere klas Bekee maka ọkwa niile malite na onye mbido ruo na ọkwa dị elu.
Ezubere ihe ọmụmụ a maka ndị na - amụghị obere asụsụ Bekee ma ọ bụ na ha amaghị. Studentsmụ akwụkwọ ga-amụ mkpụrụ akwụkwọ, akara nọmba, okwu anya, na ụda olu.
Maka ụmụ akwụkwọ nwere usoro oge adịghị anya ma ọ bụ ndị bi ebi tere aka, BEI nwere klas onwe ya n'ịntanetị maka ụmụ akwụkwọ ịmụ Bekee n'ebe ọ bụla na n'oge ọ bụla. Enyere klas site na mmekorita anyị na Burlington English.
A na-akụzi usoro Bekee e ji usoro ngwakọ mee nkuzi ma n'ịntanetị na ihu ihu. Mmụta a dị mma maka ụmụ akwụkwọ họọrọ ụzọ nkuzi onwe ha ma na-eme ya na onye nkuzi na ụmụ akwụkwọ ibe gị.
Obere nkuzi nkuzi
Mmụta a zuru oke maka obere obere nwere ebumnuche mmụta asụsụ yiri ya ma chọọ ịrụ ọrụ na ebumnuche asụsụ a kapịrị ọnụ.
BEI na-enye nkuzi nkeonwe maka nwata akwụkwọ nwere obere ikike nke nwere ike ime ka o sie ike isonye na klaasị otu. Ikike nwere oke nwere ike ịgụnye, mana ọnweghị oke na ọhụhụ ụzọ dị ala, ntị chiri, na nsogbu ije.
Na-abịa oge adịghị anya!
Bekee Maka nkuzi Nzuzo
Asụsụ Ndụ English
Ihe ọmụmụ ndị a na-ewebata ndị gbara ọsọ ndụ bịara ọhụrụ na ọrụ nke ndị America. Studentsmụ akwụkwọ ga-amara nke ọma n'akụkụ dị iche iche nke obodo anyị na Bekee achọrọ iji nwee ihe ịga nke ọma. Isiokwu ndị ama ama gụnyere agụmakwụkwọ Na-ahụ maka Ego, agụmakwụkwọ Ahụike, yana Understandghọta usoro agụmakwụkwọ US.
ELT aka ọrụ
Mmụta ndị a na-enye nkà asụsụ Bekee maka ọrụ dị iche iche. Studentsmụ akwụkwọ nọ na agụmakwụkwọ ndị a nwere ike nwee ahụmịhe ndị ọzọ na ngalaba ndị ahụ ma ọ bụ nwee ike ịbanye na ngalaba ọrụ ahụ. Isiokwu ndị ama ama gụnyere Medical Bekee, Bekee maka Nkà na ụzụ Ozi, yana Bekee maka Ndị Ọrụ Nchịkwa.
Emebere mmụta a maka ọrụ ndị nwere ọtụtụ ndị gbara ọsọ ndụ na-arụ ọrụ. Klaasị na-anọkarị n'ebe ọrụ ma na-ejikọ ikike asụsụ Bekee na nkenke ya na okwu ya na ahịrịokwu ndị akọwapụtara ya.
Ihe ụfọdụ ndị chọrọ n’obodo mgbaba Houston nwere ike ikpebi na a chọrọ klaasị Bekee maka ebumnuche ụfọdụ iji kwalite ntụkwasị obi na afọ ojuju na mpaghara dịka Mkparịta ụka, Ederede, wdg.